ISMAQAL LA’AANTA SIYAASADEED EE SOOMAALIDA
Dadka Soomaaliyeed wuxuu Ilaahey ku galladeystay nicmooyin fara badan.
Waxaan nahay ummad wada degta hal deegaan oo isku diin, isku af iyo isku dhaqan wada ah.
Waxaan nahay hal qabiil oo la yiraahdo Soomaali sababtoo ah qeexitaanka erayga qabiil waa dad isku meel wada dega oo wadaaga dan isku mid ah.
Ummadda noocaas oo kale ah waxaa laga doonayaa in ay lahaato ismaqal iyo isfahan wanaagsan oo dhexdooda ah si ay u gaarto horumar iyo barwaaqo.
Haddaba, su’aashu waxay tahay Soomaalidu ma ka run sheegtay riyadeedii aheyd waxaan nahay hal qoys? Haddii jawaabtu tahay “Maya” maxaa sababay taas?
Mid ka mid ah waxyaabaha sababay arrintaas ayaa ah ismaqal la’aan baahsan ee ka dhex jirta siyaasadda Soomaalida gaar ahaan waxaan jeclahay in aan wax ka soo qaato wixii ka danbeeyay 1990kii.
Ra’isul Wasaare Cumar Carte Qaalib
Xasuuso Janaayo 1991kii markii Maxamed Siyaad Barre uu Ra’isul Wasaare u magacaabay Cumar Carte Qaalib si ay xabbadda u joogsato. Cumar Carte iyo madaxweynaha oo shir labo maalin socday ka dib shir jaraa’id qabtay ayaa hadalladiisii waxaa ka mid ahaa “Walaalayaal, waxaan la kulmay madaxweynaha, wuu iga aqbalay wixii aan soo gudbiyay oo dhan. Fadlan, aan u duceyno madaxweynaha. Waxaana codsanayaa in xabadda la joojiyo, si aan u sagootinno Madaxweynaha.!”
Ilo xasaasi ah ee waagaa jiray ayaa waxay soo tabiyeen in madaxweynuhu ka aqbalay kooxdii Maanafesto in dalka la badbaadiyo.
Waxaa laga yaahaa in ujeedada Cumar Carte aheyd in Siyaad Barre lala galo heshiis awood-qeybsi ku saleysan (power-sharing agreement).
Soomaali badan wey ku qosleen qosleen Cumar Carte. Waxaana durbadiiba isbedellay jeceylkii loo qabay. Waxaana loo arkayey siyaasi rug-caddaa ah oo ay maradii ka dhacday, sumcaddii uu ummadda ku lahaana uu dhulka ku jiiday. Su’aasha waxay tahay maxaa ku jabnaa in Maxamed Siyaad Barre heshiis lala galo? Cumar Cartase ma saxsanaa, mise wuu qaldanaa berigaas?
Raila Odinga ayaa in ka badan 6 gobol oo 8da gobol ee Kenya ka kooban tahay doorashadii madaxweynaha ee sanadkii tegay 1997kii kaga adkaaday madaxweyne Kibaki. Laakiin, isdaba marin iyo musuqmaasuq dhacay dartiis si qalad ah dib loogu dhaariyey madaxweyne Kibaki. Muxuu sameeyay Raila? Ma jabhadeeyay mise wuxuu u dhega-nuglaaday baaqyadii ka soo baxayay qeybaha kala duwan ee dadkiisa kuwaasoo ku boorinayey inuusan dagaalimin, dalkana ka dhigin Soomaaliya oo kale!, balse heshiis awood qeybsi ah uu la galo ninkii isaga xukunka ka boobay. Akhristow, ma ogtahay, hadduusan Raila sidaasi yeeli laheyn in wixii Soomaaliya ka dhacay ahaan lahaayeen “i qarso” sababtoo ah hal usbuuc oo keliya ayaa waxaa wada holcay wadankii oo dhan. Laakiin, Ilaahey fadligiisa iyo dulqaadkii Raila muujiyay ayey Kenya ku badbaaday.
Sidoo kale, bal fiiri waxa hadda ka dhacaya dalka Zimbabwe. Waa adduunkii oo idil oo dhinac ka soo jeeda iyo Zimbabwe oo dhanka kale ah. Robert Mugabe oo lagu tilmaamo keligii-taliye ma naxe ah ayaa xukunkii laga qaadi waayay. Dani waxay kalliftay in Morgan Tfanjangaray uu qaato qaraar adag oo ah in uu awoodda la qeybsado Robert Mugabe! Dowladna wada dhistaan.
Bal fiiri, Miyuusan Cumar Carte Qaalib 17 sano ka hor garan waxa ay hadda Raila Odinga iyo Tfanjangaray moodaan in ayagu Afrika u bilaabeen sunno xasana ah?!
Tani waxay i xasuusineysaa mar BBC weydiisay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele sida uu arko ciidamada Itoobiya ee gudaha u galay dalkeena hooyo. Wuxuu ku jawaabay, “Gudineey haddaan gabalkeey kugu jirin ima goyseen”
1992-kii dowladdii ku-meelgaarka aheyd ee Cali Mahdi ayaa lagu soo dhisay dalka Djabouti iyadoo heysata taageerada beesha caalamka maadaama la siiyay mandate 2 sano oo keliya ah in ay dalka ku gaarsiiso doorashooyin xor ah!
Cumar Xaashi Aadan oo Ceydiid shirka u matalayey (maadaama Ceydiid shirka uga baaqsaday calool-xanuun) ayaa lagu gacansayray ka dib markii uu heshiikii soo saxiixay. Markii uu Cumar Xaashi ku soo laabtay Muqdisho ayuu bilaabay in uu idaacadaha ka qeyla-dhaamiyo
“Walaalayaal, waa 2 sano oo keliya. Aan yeelano samir iyo dulqaad. shirka hala taageero, qarankana hala badbaadiyo”.
Cumar Xaashi intii karaankiisa ahaa wuu dadaalay. Laakiin, lama garan. Dhegna jalaq looma siin.
Codsigii Cabdullaahi Yuusuf ee Gurigii Nabadda
Gen. Ceydiid iyo Col. Cabdullaahi Yuusuf oo sanooyin badan col ahaa ayaa miiskii alwaaxa ahaa ee gurigii nabadda wada-fadhiistay. Muddo markii la wada fadhiyay waxaa la isku mari-waayay: Cabdullaahi Yuusuf oo raba Ra’iisul-Wasaarenimo iyo Ceydiid oo diiddan in axdigii saddex geesoodka ahaa la jebiyo (Ceydiid, Cumar Jees iyo Cabdiraxmaan Tuur)!. Bal fiiri balaayada ummaddan heysata. Dadku waxay garan waayeey in SNM aysan markaan u baahneyn ra’isul wasaare kol haddii ay gooni u goosatay. Allah u naxariistee Tuurna shaqsi yahay ee sidaas Cabdullaahi Yuusuf codsigiisa looga yeelo, lagana dhigo ra’isul wasaare. Tuurna wasiir laga dhigo. Laakiin, leysma maqal, leymana fahmin.
Qudbaddii Salaadda Ciidda ee Cabdulqaasim Salaad Xasan
Sida ay ila tahay, Soomaali weligeed sooma marin shir ka wacan shirkii Carte. Mahadi ha ka gaadhee walaalkeen Ismaaciil Cumar Geele ayaa u istaagay inuu Soomaali isku keeno. Waxaa shirkii lagu doorday Mudane Cabdulqaasim Salaad Xasan. Dowladdii Carte waxa uu Ilaahey sabab uga dhigay in Soomaalidu nacdo dagaal oogayaasha, ka baxdo dagaaladii qabaa’ilka, baraarujisay nabadda qiimaheeda.
Cabdiqaasim oo ah madaxweynihii Soomaaliyeed ee ugu horeeyay, uguna danbeeyay ee meel fagaare ah ku tujiya maalin Ciid ah kumanaan kun oo ruux ayaa waxa uu dadka faray in la adeeco dowladdiisa, la adkeeyo nabadda, laga soo haro qabqablayaasha. Ha yeeshee nasiib darro waa la sii dhego cuslaaday.
Inkaarka ummaddan heysta waxa uu soo degdegay markii nasrigii Maxaakimta Alle keenay. Shiiq Shariif xikmadiisii iyo isku keenistii qeybaha bulshada oo uu hormuud ka ahaa oo aan weli xasuusto habeen uu afur u sameeyay odayaal ka socday beelaha la liido. Wuxuu Shariifku nagu booriyay in laga tago dhaqanka xun ee aan Islaamka raadka ku laheyn. Gacmaha leys qabsato. Hantida leyku celiyo. Xalay dhalay la wada noqdo. Laakiin, mar walba dadka waxbaa si ka ahaa.
Hadda iyo Nabadda Shiiq Shariif
Sida la wada ogsoon yahay Shiiq Shariif waa nin si isku mid ah shacabka Soomaaliyeed u jeclaadeen hogaankiisa xilligii maxkamadaha. Waa nin culumo ah, aqoon maadiyana leh. Shiiqu waxaa loo doortay gudoomiyaha isbaheysiga dib u xoreynta Soomaaliyeed. Hogaamiyuhuna waa go’aan-gaare (decision maker). Hogaamiyuhu wuu guuleysan karaa ama guuldareysan karaa. Shardi ma aha in go’aanka hogaamiyuhu mar walba sax ahaado. Hogaamiyana laguma doorto sida aan rabo wax u samee, ee waa la aaminaa, lagu kalsoonaadaa, lala taliyaa, wakhtina la siiyaa. Haddii kale, hogaamiyuhu waxa uu noqdaa magac-u-yaal.
Sidaan la wada soconno Shiiq Shariif waxa uu heshiis la galay beesha caalamka kaasoo qeexaya in ciidamada Itoobiya laga saaro dalkeena. Inkastoo heshiisku daciif yahay misna waa bilow fiican. Marka su’aasheydu waxay tahay maxaa Shiiqa loo maqli la’ yahay, oo loo aamini la’ yahay? Ma waxay kula tahay in Shiiqu isbedellay oo uu iibsanayo qadiyadda dadka iyo dalka?
Waxay aniga ila tahay, in ay tani tahay “Fursad Dahabi” ah ee mudan in laga faa’iideysto. Haddii wax walba “Maya” la yiraahdo, waa yaabe sidee lagu ogaan doonaa waxa jira iyo waxaan jirin?
Arrinku waa labo mid:
Shiiqu wuu guuleysan ama shiiqu wuu guuldareysan.
Hadduu shiiqu guuleysto waa nabad iyo caano.
Haddii shiiqu guuldareysto, waxaan uga fadhinnaa in uu Asmara noogu yimaado.
Cabdulqaadir Maxamuud Ibraahim